Semalt Expert: 4 karazana fiampangana an-tserasera azonao atrehina amin'izao fotoana izao
Raha mbola manohy mampifandray computers maro, hackers ary mpamono olon-tsotra hafa ny aterinetodia manohy mamolavola teknika vaovao hanatanterahana izay ilainy. Ny fitaovana ampiasain'ireo mpihetraketraka dia manohy tsara hatrany amin'ny fandrosoana ara-teknolojia. Rehefa izahaymanao tranokala, tsy dia heverintsika loatra fa ny hacker dia afaka manaisotra fanazavana sarobidy avy amin'ny ordinatera - large it services companies. Vokatr'izany,Ny fiarovana ny tranokala e-commerce sy ny mpanjifanao dia miankina betsaka amin'ny admin.
Mba hialana amin'ireo tranga ireo, dia zava-dehibe foana ny mampiditra manokanaFitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka Izany no mahatonga an'i Ross Barber, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia nanondro ny karazana malaza indrindra amin'ny solosaina mifandraika amin'ny ordinatera:
Io heloka bevava io dia mitaky ny fampiasana pejy hosoka na kliofona. A hacker na cybercriminalAo ambadiky ny antony dia afaka mamorona pejy izay mitovy amin'ny endrika Internet na famantarana famantarana. Taorian'ity fantsona ity, ny mpampihorohorodia mikaroka ny fomba ahafahan'ireo niharam-boina manindry ireo rohy ireo. Ity teknika ity dia fitaovana manokana amin'ny fangalarana ny mombamomba ny olona toy izanytenim
Ny famonoana dia iray amin'ireo tranga tranainy indrindra amin'ny aterineto. Ny hacking dia miteraka tsy ara-dalànafampidiran-tsonia amin'ny ordinatera ary manatanteraka ny sasany amin'ireo karazana tsy ara-dalàna amin'ny rafitra. Ny ankamaroan'ny tranga rehetra dia ny fisainana ratsyao ambadiky ny olona milalao hacks..Ny fanesorana dia manamora ny heloka bevava sy ny heloka bevava. Ohatra, ny hackers dia afaka mahazo fidirana amin'ny banky samihafalogins amin'ny endrika samihafa. Ireo logins ireo dia azo jerena ao amin'ny tranonkala mainty ho an'ireo olona any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana izay mandidy ny volatsy misy soritra.
3. Taridalana famantarana
Ny fampahalalana manokana dia mety hivezivezy amin'ny alalan'ny rafitra solosaina haingana. Ohatra,Ireo hackers dia afaka mampiasa teknika tsotra toy ny SQL Injection ary mahazo miditra ao anaty daty iray izay feno fampahalalana momba ny mpanjifa. Vokatr'izany,Ny hacker dia afaka manova, manangona, maka download na mamafa ireo rakitra ao amin'ny tranonkala vulnerable. Ankoatra izany, ny hacker dia afaka manao asa tsy manara-dalàna ihany koatoy ny fangalarana ny mombamomba ny olona ampiasaina amin'ny hetsi-panoherana hafa amin'ny aterineto.
4. Cloning of tranokala
Ny sasany amin'ireo mpanao heloka bevava dia manararaotra ny fahaiza-manaony manoatra noho ny spamming. Ohatra, misydia ireo tranga izay ahafahan'ny hackers mamorona tranonkala izay dika mitovy amin'ny tranonkala iray hafa. Ny fikasana serivisy ao ambadik'ity tricks ity dia mety ahitana ny filàna sasanymanafika olona vulnerable. Amin'ny toe-javatra hafa dia mamitaka ny olona izy ireo amin'ny fidirana amin'ny tranokala sasany ao amin'ny fivarotam-boky, mba hangalarana vola beavy amin'izy ireo. Amin'ny toe-javatra hafa, ny haino aman-jery manokana dia mety hipoitra amin'ny hackers amin'izany fomba izany.
Ireo tranga momba ny hosoka amin'ny aterineto dia mihamahazo aorian'ny fampivoarana ny rafitra fanehoana an-tserasera.Maro ireo tranga izay tafiditra amin'ny fampiharana ny fiarovana amin'ny aterineto ataon'ny olona ao anaty fanjakana iray. Amin'ireo tranga rehetra ireo dia olona tahaka ny hackersary milalao anjara mavesa-danja ny scammers. Ny fahalalàna ny karazana sy ny endrika hosoka amin'ny computer dia mety hahasoa ny fomba fiasan'ny rafitra iray. InIreo tranga hafa, ny hosoka amin'ny ordinatera dia manome fototra ahafahan'ny olona mahita sy manamboatra hacks toy ny fisintonana. Ity toro-lalana ity dia afaka manampy ny admin webna ny mpamaham-bolongana dia mampitombo ny fiarovana ny fepetra napetraka ho an'ny hacking feno.